Mareykanka oo xaqiijiyay in ciidamo Soomaali ah la geeyay Itoobiya | KEYDMEDIA ONLINE
Mareykanka oo xaqiijiyay in ciidamo Soomaali ah la geeyay Itoobiya
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamadii Soomaaliyeed ee loo qaaday Eritrea ay gudaha u galeen Itoobiya.
WASHINGTON, USA - Sida uu sheegay sii hayaha ku-xigeenka Xoghayaha Waaxda Arrimaha Afrika ee Mareykanka, Robert F. Godec, Mareykanku wuxuu xaqiijinayaa in ciidamadii Soomaaliya ee loo qaaday Eritrea lagu arkay gudaha Itoobiya.
Isagoo ka jawaabayay su’aal ay weydiisay Ilhaan Cumar oo ka tirsan Aqalka Wakiillada Mareykanka, taas oo la xariirtay ciidamada Soomaaliya ee ka dagaalamay waqooyiga Itoobiya, wuxuu hoosta ka xariiq Robert F. Godec, inuu hubo in askar Soomaaliyed la geeyay Itoobiya.
“Waxaan ka war qabnaa in ciidamo Soomaali ah ay joogeen gudaha Itoobiya, hayeeshee, xilligaan ma caddeyn karo inay dagaal ka qeyb qaateen iyo in kale”. Ayuu yiri Robert F. Godec.
“Waxaan rumeysnahay in ciidamadaas yihiin kuwo Soomaaliya ay tababar ugu dirtay Eritrea, kadib heshiis dhexmaray labada dal”. Ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Inkastko Dowladda Soomaaliya ay beenisay in ay jiraan ciidamo Soomaali ah oo ka dagaallamay Itoobiya, haddana warbixin ka soo baxday Guddiga QM ugu qaabilsan Xuquuqda Aadanaha ayaa lagu sheegay in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday dalka Eratariya ay ku lug lahaayeen dagaalkii lagu qaaday gobolka Tigreega ee Itoobiya.
Sida ay sheegayaaan ilo xog ogaal ah, Go'aanka dhalinyarada Soomaaliyeed loogu diray inay ka dagaallamaan gobolka Tigreega ee Itoobiya, wuxuu qayb ka ahaa istiraatiijiyad lagu abuurayay ciidan isku dhaf ah oo ka kooban Ereteriya, Itoobiya iyo Soomaaliya, kuwaas oo shaqadoodu tahay xakameynta mucaaradka ka dhanka ah hoggaamiyeyaasha saddexda dal.
Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea, ayaa lagu eedeeyay in geysteen xasuuq ka dhan ah shacabka Tigreyga, isla markaana kufsi kula kaceen haween.